Bhuku Rechipiri reMadzimambo 9:1-37
Jehu anozodzwa kuva mambo weIsraeri (1-13)
Jehu anouraya Jehoramu naAhaziya (14-29)
Jezebheri anourayiwa; anodyiwa nembwa (30-37)
9 Zvino muprofita Erisha akashevedza mumwe wevanakomana vevaprofita, akati kwaari: “Monera nguo dzako muchiuno, ukurumidze kutora kamudziyo aka kemafuta,* uende kuRamoti-giriyedhi.+ 2 Paunosvika ikoko, tsvaga Jehu+ mwanakomana waJehoshafati mwanakomana waNimshi; pinda mukati uite kuti asimuke kubva pakati pehama dzake, wopinda naye muimba yemukatikati. 3 Utore kamudziyo kemafuta, uadururire mumusoro make uti, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndakuzodza kuti uve mambo weIsraeri.”’+ Kana wadaro, vhura suo ubve wangotiza.” 4 Saka mushandi wemuprofita wacho akasimuka akaenda kuRamoti-giriyedhi. 5 Paakasvika ikoko, akawana vakuru veuto vakagara. Akati: “Ndine shoko renyu mukuru wangu.” Jehu akabvunza kuti: “Raani pakati pedu?” Iye akati: “Renyu imi mukuru wangu.” 6 Saka Jehu akasimuka akapinda mumba; uye mushandi wacho akadururira mafuta mumusoro make, akati kwaari: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri: ‘Ndakuzodza kuti uve mambo wevanhu vaJehovha, ivo vaIsraeri.+ 7 Unofanira kuuraya imba yaAhabhi ishe wako, uye ndichatsiva ropa revaranda vangu vaprofita nerevashumiri vaJehovha vese vakaurayiwa naJezebheri.+ 8 Imba yese yaAhabhi ichaparara; uye ndichaparadza vanhurume vese* vekwaAhabhi, kusanganisira varombo nevasina simba muIsraeri.+ 9 Ndichaita kuti imba yaAhabhi iite seimba yaJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, uye seimba yaBhaasha+ mwanakomana waAhija. 10 Kana ari Jezebheri, imbwa dzichamudyira mumunda uri kuJezreeri,+ uye hapana achamuviga.’” Akabva avhura suo akatiza.+ 11 Jehu paakadzokera kuvaranda vashe wake, vakamubvunza kuti: “Kwakanaka here? Benzi iri ravingei kwauri?” Akavapindura kuti: “Munongomuzivawo murume wacho uye zvaanotaura.” 12 Asi ivo vakati: “Uri kunyepa! Tiudzewo zvaataura.” Akabva ati: “Ataura neni izvi, achibva azoti, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndakuzodza kuti uve mambo weIsraeri.”’”+ 13 Mumwe nemumwe wavo akabva angotora nguo yake, akaiwaridza pamasitepisi kuti Jehu atsike,+ uye vakaridza hwamanda vakati: “Jehu ava mambo!”+ 14 Jehu+ mwanakomana waJehoshafati mwanakomana waNimshi akabva apandukira Jehoramu. Jehoramu ainge akarinda kuRamoti-giriyedhi,+ iye nevaIsraeri vese, kuti vasarwiswa naMambo Hazaeri+ weSiriya. 15 Gare gare Mambo Jehoramu akadzokera kuJezreeri+ kuti apore maronda aakakuvadzwa nevaSiriya paakarwa naMambo Hazaeri weSiriya.+ Zvino Jehu akati: “Kana muchinditsigira,* musarega chero munhu upi zvake achitiza muguta kuti anotaura izvi kuJezreeri.” 16 Jehu akabva akwira mungoro yake akaenda kuJezreeri, nekuti Jehoramu akanga akarara ikoko sezvo akanga akakuvara, uye Mambo Ahaziya weJudha ainge adzika kunoona Jehoramu. 17 Murindi paakanga akamira pashongwe iri muJezreeri, akaona boka guru revarume vaJehu richiuya. Akabva angoti: “Pane varume vakawanda vandiri kuona.” Jehoramu akati: “Tora murwi anotasva bhiza, umutume kuti anosangana navo, anoti, ‘Mauya murugare here?’” 18 Saka mutasvi webhiza akaenda kunosangana naye akati: “Zvanzi namambo, ‘Wauya murugare here?’” Asi Jehu akati: “‘Rugare’ rwekuita sei? Enda shure kwangu unditevere!” Murindi wacho akabva ati: “Nhume yacho yasvika kwavari, asi haina kudzoka.” 19 Saka akatuma mutasvi webhiza wechipiri, uyo akasvika kwavari akati: “Zvanzi namambo, ‘Wauya murugare here?’” Asi Jehu akati: “‘Rugare’ rwekuita sei? Enda shure kwangu unditevere!” 20 Murindi wacho akabva ati: “Asvika kwavari, asi haana kudzoka, uye kutyaira kuri kuita mukuru wavo kwakaita sekutyaira kwaJehu muzukuru* waNimshi, nekuti anotyaira ngoro semunhu anopenga.” 21 Jehoramu akati: “Sungai ngoro!” Saka vakasunga ngoro yake yehondo uye Mambo Jehoramu weIsraeri naMambo Ahaziya+ weJudha vakabuda kuti vanosangana naJehu, mumwe nemumwe ari mungoro yake yehondo. Vakasangana naye mumunda waNabhoti+ muJezreeri. 22 Jehoramu paakangoona Jehu, akati: “Wauya murugare here nhai Jehu?” Asi iye akati: “Kungava nerugare rwei kana upfambi hwaJezebheri+ amai vako neuroyi+ hwavo huzhinji zvichiripo?” 23 Jehoramu akabva atendeutsa ngoro yake kuti atize, uye akati kuna Ahaziya: “Ahaziya, tanyengerwa!” 24 Jehu akatora uta hwake, akapfura Jehoramu pakati pemapendekete, uye museve wacho wakabuda nepamwoyo pake, achibva awira mungoro yake yehondo. 25 Jehu akabva ati kuna Bhidkari mubatsiri wake: “Musimudze umukande mumunda waNabhoti muJezreeri.+ Yeuka kuti ini newe takanga tichityaira ngoro dzaiva mumashure mababa vake Ahabhi, Jehovha paakataura chirevo ichi pamusoro pake chekuti:+ 26 ‘“Sekuona kwandakaita ropa raNabhoti+ nerevanakomana vake nezuro,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “ndinopika kuti ndichakutsiva+ mumunda iwo uno,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.’ Saka musimudze umukande mumunda wacho, maererano neshoko raJehovha.”+ 27 Mambo Ahaziya+ weJudha paakaona zvaiitika, akatiza nenzira yekuimba yaiva mumunda. (Gare gare Jehu akamutevera akati: “Naiyewo mubayei!” Saka vakamubaya ari mungoro yake paaiva munzira achikwidza kuGuri, iri pedyo neIbreyamu.+ Asi akaramba achitiza achienda kuMegidho, uye akafira ikoko. 28 Varanda vake vakabva vamutakura mungoro vakaenda naye kuJerusarema, vakamuviga muguva rake pamwe chete nemadzitateguru ake muGuta raDhavhidhi.+ 29 Ahaziya+ akanga ava mambo weJudha mugore rechi11 raJehoramu mwanakomana waAhabhi.) 30 Jehu paakasvika kuJezreeri,+ Jezebheri+ akazvinzwa. Saka akapenda maziso ake nezvekuzora zvitema, akagadzira musoro wake, akatarisa pasi nepahwindo. 31 Jehu paaipinda nepagedhi, Jezebheri akati: “Chii chakaitika kuna Zimri uya akauraya ishe wake?”+ 32 Jehu akatarisa kumusoro kuhwindo racho akati: “Ndiani ari kudivi rangu? Ndiani?”+ Vakuru vaviri kana vatatu vemumuzinda vakabva vatarisa pasi kwaari. 33 Akati: “Mukandei pasi!” Saka vakamukanda pasi, uye rimwe ropa rake rakatsatikira pamadziro nepamabhiza, achibva amutsika-tsika. 34 Pashure paizvozvo akapinda mukati, akadya nekunwa. Akabva ati: “Ndapota, onai zvekuita nemukadzi uyu akatukwa mumuvige. Handiti mwanasikana wamambo.”+ 35 Asi pavakaenda kunomuviga, havana chavakawana kunze kwedehenya rake netsoka dzake nezvanza zvemaoko ake.+ 36 Pavakadzoka vakamuudza, iye akati: “Izvi zviri kuzadzisa shoko raJehovha+ raakataura achishandisa muranda wake Erisha muTishbhi, achiti, ‘Imbwa dzichadyira nyama yaJezebheri mumunda wekuJezreeri.+ 37 Chitunha chaJezebheri chichava mupfudze paivhu remumunda uri muJezreeri, kuti varege kuzoti: “Uyu ndiJezebheri.”’”
^ Kana kuti “chinu ichi chemafuta.”
^ ChiHeb., “chero munhu anoitira weti pamadziro.” Aya matauriro echiHebheru ekuzvidza aireva kuti vanhurume.
^ Kana kuti “Kana mweya yenyu ichinditsigira.”